အင်္ဂလန်ပရိသတ်တွေကို ညို့ငင်ဖမ်းစားခဲ့တဲ့ Presenter မိန်းမချောလေး လူဝီစီဂျုံးစ်
အင်္ဂလန်ပရိသတ်တွေရဲ့ အာရုံကို ညို့ငင်ဖမ်းစားခဲ့တဲ့ Presenter မိန်းမချောလေး လူဝီစီဂျုံးစ် Louise Jones
10 Jun 2018 . 4:30 PM
ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့က အင်္ဂလန်နဲ့ ကော်စတာရီကာတို့ဟာ လိဒ်စ်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ Elland Road မှာ ခြေစမ်းပွဲယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြတယ်။ ပရိသတ်တွေ သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ အင်္ဂလန်အသင်းက ရပ်ရ်ှဖို့ဒ် Rashford ၊ ၀ဲလ်ဘတ် Welbeck တို့ရဲ့ ဂိုးတွေနဲ့အတူ ကော်စတာရီကာကို (၂-၀)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီပွဲမှာ အင်္ဂလန်ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားခဲ့တာက ရပ်ရ်ှဖို့ဒ်လည်း မဟုတ်ဘူး၊ ၀ဲလ်ဘတ်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ပရိသတ်တွေကို ညို့ငင်သွားတာက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ပုရိသတွေအကြိုက် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ကောက်ကြောင်းပိုင်ရှင် ရုပ်သံသတင်းတင်ဆက်သူ လူဝီစီဂျုံးစ် Louise Jones ပါပဲ။
အဲဒီခြေစမ်းပွဲမှာ လူဝီစီဂျုံးစ်ဟာ အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့အရံခုံတန်းနောက်မှာ ထိုင်နေတာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ အလှအပကြောင့် ဒီပွဲကို ရိုက်ကူးနေတဲ့ ကင်မရာသမားတောင် သူမရဲ့အလှမှာ မျောပါခဲ့ပြီး လူဝီစီဂျုံးစ်ကိုပဲ ဦးစားပေး ဖော်ပြခဲ့တာကနေ အင်္ဂလန်ပရိသတ်တွေ က သတိပြုမိခဲ့တာပါ။ ကော်စတာရီကာနဲ့ခြေစမ်းပွဲအပြီး အင်္ဂလန်ပရိသတ်တွေအချင်းချင်း မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာက ဒီ နတ်မိမယ်လေးက ဘယ်သူလဲဆိုတာပါပဲ။
တချို့ပရိသတ်တွေက “ဆံပင်ရွှေအိုရောင်ပိုင်ရှင် ကောင်မလေးက ဘယ်သူလဲတော့ မသိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ပုံစံက အရမ်းမိုက်တယ်ကွာ”ဆိုပြီး Twitter မှာ ရေးသားခဲ့သလို၊ သူမကို သိတဲ့ပရိသတ်တစ်ဦးကတော့ “အဲဒါက လိဒ်စ်အသင်းပိုင်ကွ၊ နောက်မှ ငါ့ကို မင်းတို့ ကျေးဇူးတင်လိမ့်မယ်”လို့ ရေးသားခဲ့ကြတယ်။ တကယ်တော့ လူဝီစီဂျုံးစ်ဟာ အင်္ဂလန်-ကော်စတာရီကာပွဲအတွက် အင်္ဂလန်အသင်းနောက်ခံလူဟောင်း ဒန်နီမေးလ် Danny Mills နဲ့အတူ ပွဲမတိုင်ခင် အစီအစဉ်တင်ဆက်ခဲ့တာပါ။ သူမဟာ လိဒ်စ်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ပွဲတွေမှာ ရုပ်သံတင်ဆက်သူအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီး အခုမှပဲ အင်္ဂလန်ပရိသတ်တွေက သတိပြုမိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် လူဝီ၀ီဂျုံးစ်ရဲ့ သတင်းတွေက လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်မှာ ပြန့်နှံ့နေပြီဖြစ်ပြီး ကော်စတာရီကာကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ အောင်ပွဲတောင် မှေးမှိန်သွားသလိုဖြစ်ခဲ့ရတယ် . . .
Photo: The Sun,Youtube
အင်ျဂလနျပရိသတျတှရေဲ့ အာရုံကို ညို့ငငျဖမျးစားခဲ့တဲ့ Presenter မိနျးမခြောလေး လူဝီစီဂြုံးဈ Louise Jones
ပွီးခဲ့တဲ့ကွာသပတေးနကေ့ အင်ျဂလနျနဲ့ ကျောစတာရီကာတို့ဟာ လိဒျဈယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ အိမျကှငျးဖွဈတဲ့ Elland Road မှာ ခွစေမျးပှဲယှဉျပွိုငျကစားခဲ့ကွတယျ။ ပရိသတျတှေ သိကွတဲ့အတိုငျးပဲ အင်ျဂလနျအသငျးက ရပျရျှဖို့ဒျ Rashford ၊ ဝဲလျဘတျ Welbeck တို့ရဲ့ ဂိုးတှနေဲ့အတူ ကျောစတာရီကာကို (၂-ဝ)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီပှဲမှာ အင်ျဂလနျပရိသတျတှေ စိတျဝငျစားခဲ့တာက ရပျရျှဖို့ဒျလညျး မဟုတျဘူး၊ ဝဲလျဘတျလညျး မဟုတျဘူး။ ပရိသတျတှကေို ညို့ငငျသှားတာက ခဈြစရာကောငျးတဲ့ မကျြနှာနဲ့ ပုရိသတှအေကွိုကျ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ ကောကျကွောငျးပိုငျရှငျ ရုပျသံသတငျးတငျဆကျသူ လူဝီစီဂြုံးဈ Louise Jones ပါပဲ။
အဲဒီခွစေမျးပှဲမှာ လူဝီစီဂြုံးဈဟာ အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့အရံခုံတနျးနောကျမှာ ထိုငျနတောဖွဈပွီး သူမရဲ့ အလှအပကွောငျ့ ဒီပှဲကို ရိုကျကူးနတေဲ့ ကငျမရာသမားတောငျ သူမရဲ့အလှမှာ မြောပါခဲ့ပွီး လူဝီစီဂြုံးဈကိုပဲ ဦးစားပေး ဖျောပွခဲ့တာကနေ အင်ျဂလနျပရိသတျတှေ က သတိပွုမိခဲ့တာပါ။ ကျောစတာရီကာနဲ့ခွစေမျးပှဲအပွီး အင်ျဂလနျပရိသတျတှအေခငျြးခငျြး မေးခှနျးထုတျခဲ့တာက ဒီ နတျမိမယျလေးက ဘယျသူလဲဆိုတာပါပဲ။
တခြို့ပရိသတျတှကေ “ဆံပငျရှအေိုရောငျပိုငျရှငျ ကောငျမလေးက ဘယျသူလဲတော့ မသိဘူး၊ ဒါပမေဲ့ ပုံစံက အရမျးမိုကျတယျကှာ”ဆိုပွီး Twitter မှာ ရေးသားခဲ့သလို၊ သူမကို သိတဲ့ပရိသတျတဈဦးကတော့ “အဲဒါက လိဒျဈအသငျးပိုငျကှ၊ နောကျမှ ငါ့ကို မငျးတို့ ကြေးဇူးတငျလိမျ့မယျ”လို့ ရေးသားခဲ့ကွတယျ။ တကယျတော့ လူဝီစီဂြုံးဈဟာ အင်ျဂလနျ-ကျောစတာရီကာပှဲအတှကျ အင်ျဂလနျအသငျးနောကျခံလူဟောငျး ဒနျနီမေးလျ Danny Mills နဲ့အတူ ပှဲမတိုငျခငျ အစီအစဉျတငျဆကျခဲ့တာပါ။ သူမဟာ လိဒျဈယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ ပှဲတှမှော ရုပျသံတငျဆကျသူအဖွဈ ဆောငျရှကျနတောဖွဈပွီး အခုမှပဲ အင်ျဂလနျပရိသတျတှကေ သတိပွုမိခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
အခုဆိုရငျ လူဝီဝီဂြုံးဈရဲ့ သတငျးတှကေ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာထကျမှာ ပွနျ့နှံ့နပွေီဖွဈပွီး ကျောစတာရီကာကို အနိုငျရခဲ့တဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ အောငျပှဲတောငျ မှေးမှိနျသှားသလိုဖွဈခဲ့ရတယျ . . .